Apple wuxuu u oggolaan karaa kuwa horumariya inay u sameeyaan taleefannada Apple Watch | Wararka IPhone
Maalin kale Apple waxay ku soo bandhigtay boggeeda internetka horumariyeyaasha watchOS 4.3.1 beta. Warka ku jira qaabkan ma badna, laakiin khadadka koodhka ayaa la ogaanayaa Tani waxay tilmaam u tahay wararka aan ku heli karno watchOS 5. Cusboonaysiintaan weyn ee nidaamka hawlgalka Apple Watch waxaa lagu arki karaa WWDC xagaagan.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha waxay ogaadeen qayb cusub oo koodh ah beta-ka watchOS 4.3.1 oo loola jeedo xirmo cusub oo horumarineed oo loo yaqaan 'NanoTimeKit', oo ku taal goobaha ay ka kooban yihiin Apple Watch wajiyada. Qalabkani wuxuu u oggolaan lahaa abuurayaasha sameyso dials khaas ah, wax in Apple ma ogola Ilaa hadda.
Dabacsanaanta Apple xilliyadii ugu dambeeyay: watchOS 5
Alaarmiga ayaa kacay markii 9to5Mac laga helay lambarka qarsoon ee watchOS 4.3.1 beta tixraac Qalabka NanoTime. Qalabkan horumarineed ma jiro maanta, laakiin wuxuu ku yaal qaybta software-ka meesha shaashadda Apple Watch waa la qaabeeyey. Sida muuqata, aaladdan cusub ee lagu soo bandhigi karo WWDC 2018 ayaa u oggolaan doonta horumariyeyaasha abuuro goobo caado ah saacadda.
Isku xirnaanta xirmada waxay umuuqataa inay muujineyso inay laxiriiridoonto Xcode, barnaamijka hormarinta Apple, marka mabda 'ahaan kuwa horumariya dhinac sadexaad maheli karaan qaab dhismeedka horumarineed, laakiin maadaama koodhku qaabaysan yahay Waa la kordhin karaa kadib cusbooneysiinta mustaqbalka. Macluumaadkan waxaa lagu qariyey beta, sidaa darteed ma fileyno inay ku cusub tahay nooca ugu dambeeya ee watchOS 4.3.1.
Apple waxay la qabsaneysaa codsiyada isticmaalaha goor dambe. Isticmaalayaashu way faraxsan yihiin shakhsiyeynta qalabkaaga, Waana iska cadahay in qaabeyntaasi aysan imaanaynin warshad, laakiin hal-abuurka horumariyayaashu waa inay noqdaan lama huraan in la sameeyo aaladaha aan jecel nahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay u oggolaan kartaa horumariyeyaasha inay u sameystaan ​​taleefannada Apple Watch
Waxay ahayd sida saxda ah sababta uu iigu iibiyay saacaddayda tufaaxa, caajis maya, kuwan soo socda, aad ugu faraxsanahay qalabkayga s3, maalin kasta saacad cusub oo leh dial aad rabto. tufaax raali ahaw.
Waxaan xiiseynayaa daawashada Samsung sidoo kale, ma ku isticmaashaa iPhone?
Hadday haa tahay, howlahee ayaa maqan?
Runta ayaa ah in tan ay ahayd in la dhaqan geliyo wakhti yar ka hor.
Dagaalka ka dhanka ah xogaha ayaa dhaliyay 29 shaqo ka fadhiisis sanadkii hore